मनोरञ्जन – Page 933 – Etajakhabar
सानैदेखि गर्लफ्रेण्ड बनाउन खप्पिस थिए रणवीर, पढाईमा भने निकै कमजोर
असोज १२ गते- अभिनेता रणवीर कपूरको बाल्यकाल निकै रमाईलो छ । बाल्यकाल देखि नै गर्लफ्रेण्ड बनाउनमा खप्पीस उनले सात कक्षामा पढ्दा नै गर्लफ्रेण्ड बनाउन सुरु गरेका थिए । पहिलो प्रेमीकासँग ब्रेकअप भएपछि जीवनमा कहिल्यै पनि प्रेममा नपर्ने अठोट लिएपनि उनी ईमरान खानकी श्रीमतीको प्रेममा परे । अर्काकी श्रीमतीको प्रेममा पर्ने रणवीरलाई यही उदाहरण काफी हुनसक्छ की उनी गर्लफ्रेण्ड बनाउन खप्पिस छन् भनेर । दोश्रो प...
११ वटा फिल्म हलले तिरेनन् सरकारलाई कर, कार्वाहीको प्रक्रिया अघि बढ्दै
काठमाडौँ, १२ असोज । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रही सञ्चालन हँुदै आएका ११ वटा चलचित्र घरले मनोरञ्जन कर नतिर्दा रु २५ लाख बक्यौता बाँकी छ । हालसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाअन्तर्गत रही सञ्चालन भएका चलचित्र घर ११ वटा छन् । तीमध्ये छ वटाको आफ्नै भवन रहेको छ भने पाँच वटा भाडाका रहेका छन् । सञ्चालित सबै चलचित्र घरले मनोरञ्जन कर नतिर्दा यतिधेरै बक्यौता बाँकी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प...
अब एकबर्षसम्म दयाहाङ्ग राई ‘व्यस्त’
पछिल्लो समयका सर्वाधिक व्यस्त अभिनेता हुन्– दयाहाङ राई । एकलगत्तै अर्काे फिल्मको सुटिङमा व्यस्त हुने गरेका राई अबको झन्डै एक वर्षसम्मका लागि ‘प्याक’ छन् । ‘झन्डै एक वर्षलाई पुग्ने काम छ हौ,’ दयाहाङ भन्छन्, ‘फिल्म नै फिल्म भएकाले थिएटरतिर ध्यान दिन पाएको छैन । ’ अनामनगरस्थित मण्डला थिएटरका सञ्चालकसमेत रहेका उनी फिल्म र नाटकलाई समानान्तर रूपले अघि बढाउन चाहन्छन् । तर, फिल्ममा अध्यधिक ‘डिमान्ड’ भएकाल...
मुस्लिम मुलकी यि युवती बनिन् विश्वकै १ नम्बर पोर्नस्टार, पोर्न फिल्म खेलेको भन्दै आयो मार्ने सम्मको धम्की
एजेन्सी । पोर्न अर्थात ब्यू फिल्म धेरै युवतीले खेलेका छन् । तर मुस्लिम समुदायबाट कमै सुन्दरीहरुले मात्र अश्लिल चलचित्रमा खेलेका छन् । ति मध्येमा पनि कमैले मात्र चर्चा कमाएका छन् । ति मध्येकी एक हुन् २१ वर्षकी मिया खलीफा । लेवनानी मुलकी मुस्लिम युवती अश्लिल चलचित्रको दुनियाँमा प्रवेश गरेको ३ महिनमा संसारकै सबै भन्दा चर्चित बन्न पुगेकी छिन् । उनी नम्बर १ पोर्न स्टार बनेपछि उनलाई कारवाह...
‘धमाल’ मा जम्ला त अक्षय र परेशको जोडी ?
असोज १२ गते- बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार यसअघि चार वर्षअगाडि परेश रावलसँग फिल्म ‘ओ माई गड’मा देखिएका थिए । अब फेरि यी दुईले एउटै पर्दामा ‘धमाल’ गर्दै छन् । यो नयाँ फिल्ममा अक्षय कुमार पहिलोपटक रोहित सेट्ठीसँग पनि जोडिँदै छन् । तर, अहिलेसम्म यो फिल्मको नाम फाइनल भइसकेको छैन । फिल्मचाहिँ प्रियदर्शनले निर्देशन गर्दै छन् । यसअघि यी दुई अभिनेतालाई ‘हेराफेरी’, ‘गरम मसला’, ‘भागम भाग’, ‘दे दना दन’लगायत ...
अमीषाका बाथरुम तस्विर सार्वजनिक, भए सामाजिक संजालमा भाइरल
एजेन्सी । बलीउड सुन्दरी अमीषा पटेल यतिबेला औधी चर्चामा छिन् । उनी आफ्नै कारणले चर्चा आएकी हुन् । चर्चामा आउनुको कारण हो इन्स्टाग्राममा हालै उनले पोष्ट गरेका बाथरुम तस्विरहरु । जहाँ उनले नुवाउँदै गरेका तस्विरहरु पोष्ट गरेकी थिइन् । बाथरुममा ‘सावर’ लिँदै गरेको फोटोको क्याप्सनमा उनले लेखेकी ‘सावर लाइक अ रकस्टार लेखेपछि उनलाई उडाउनु सम्म उडाइएको छ सामाजिक संजालमा । उनका सार्वजनिक बाथरुम तस्विरमा ...
जस्मिन बनिन् मिस टिन नेपाल २०१६
ताजाखबर। २१ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै '१४ औं मिस टिन नेपाल-२०१६'को उपाधि काठमाडौंकी १७ बर्षिया जस्मिन खड्काले जितेकी छिन् । काठमाडौं जेसिसद्वारा मंगलबार राजधानीको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजिता अन्तिम प्रतिस्पर्धामा उनले मिस टिन नेपाल-२०१६को उपाधि जितेकी हुन् । शिर्ष उपाधिसँगै उनले मिस फोटोजिनक र विभिन्न उपहार समेत प्राप्त गरिन् । काठमाडौंकी १८ बर्षिया उर्जा नेवा 'फस्ट रनर अप' भईन् । उ...
तायाहाङ्माको ‘हरेक दिन’ सार्वजनिक (भिडियो)
ताजाखबर। पछिल्लो समय आधुनिक गायनमा निकै चर्चामा रहेकी गायिका तायाहाङ्मा राईको 'हरेक दिन' बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । स्वप्निल लिम्बुको शब्द रहेको गीतमा दिनेश सुब्बाको संगीत समावेश रहेको छ । गीतलाई किरण कडेलले एरेञ्ज गरेका हुन् । म्युजिक भिडियो निर्देशनका किङ प्रशन्न पौडेलले अमेरिकामा सुटिङ गरिएको भिडियोमा एउटा केटा र केटीको लवलाई कथाको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । म्युजिक भिड...
प्रभासको जन्मदिनमा आउनेछ ‘बाहुबली २’को फर्ष्ट लुक
ताजाखबर। गत बर्ष 'बाहुबली'ले एक प्रश्न अधूरो छोडेको थियो । अब 'बाहुबली २' ले यो थाहा दिनेछ कि कटप्पाले बाहुबलीलाई किन मारे । हाल भारतको हैदरावादमा फिल्मको क्लाइमेक्स शूटिंग चलिरहेको छ । दर्शकले 'बाहुबली २'लाई अत्यन्तै कुरिरहेका छन् । खबरका अनुसार यसको फर्ष्ट लुक २३ अक्‍टूबरमा सार्वजनिक गरिनेछ । यो दिन नायक प्रभासको जन्मदिन हो । यो फिल्मको पहिलो भागले बक्स अफिसमा धेरै फिल्मका रेकर्ड तोडेक...
असी बर्षको हुँदा समेत गीत गाउँदैछन् प्रेमध्वज
ताजाखबर। उमेरले आठ दशक पुगेका अग्रज गायक प्रेमध्वज प्रधानको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । 'ती आँखामा को छ....' गीतको राजधानीमा सोमवार एक समारोहबीच सार्वजनिक गरियो । गायक प्रधानले अहिलेका पुस्तासँग गीत गाउँन पाउँदा खुसी लागेको बताए । सरल र मिठास गीत पाएमा आउँदा दिनमा अझै गीत रेकर्ड गराउने योजना पनि उनले सुनाए । यो गीतका रचनाकार डब्बु क्षत्री हुन् । डब्बुले प्रधानका गीतबाट म स्कुले जीवनबाटै ...
Previous 1 … 932 933 934 … 1,033 Next
-20080 second ago
-14527 second ago
-13460 second ago
-12913 second ago
-9177 second ago
-8276 second ago
-6892 second ago
-6026 second ago